Budada Raw Unifiram (272786-64-8) Soosaarayaasha - Kiimikada loo yaqaan 'Phcoker Chemical'
Budada Raw Unifiram (DM-232) waa awood aad u xoog badan oo loo yaqaan 'AMPAkine-nootropic' oo leh antiamnesic iyo saameynta kor u qaadista garashada ee….
Capacity: 1180kg / bishii
Qalabka Hilibka Unifiram (272786-64-8)
Nooca Biyaha Unifiram (272786-64-8) Sharaxaad
Kalluunka Unifiram, oo loo yaqaan DM-232, waa daroogada cusub ee aanotropic ahayn. Qaab-dhismeedkuna waa sida ampakin, waxana uu si dhow ula xiriiraa budada SRaw Unifiram. Kalluunka Unifiram waa mid ka mid ah taakulada maskaxda ee ugu awoodda badan, waxana uu leeyahay waxyaabo ay ka mid yihiin antiamnesic iyo waxyeellooyin kale oo ku saabsan daraasaadka xayawaanka ilaa kun jeer oo ka sarreeya awoodda budhcad-badeeda. Kalluunka Unifiram waxaa lagu muujiyey in la yareeyo muddada hypnosis ay sababto pentobarbital, iyada oo aan laheyn isuduwidda mootada. Kalluunka Unifiram waa ambalaan-bixiyaha AMPA ee ambalaasta oo dhan.
Dufanka Unifiram (272786-64-8) Smamnuucista
Product Name Kalluunka Unifiram
Magaca Kiimikada DM-232, CHEMBL140717, CTK0J2726, DTXSID00432024, AKOS017975218,2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one;(8aR)-2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one;Pyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one, 2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]hexahydro-
Molecular Wsideed 298.3332032
Fdib u soo celinta Psaliid Wax macluumaad ah oo la heli karo
Biological Life-Life saacadood 4-6
Color Saf White
SOlubility Qodobka biyaha
Storage Temperature SOOMAALIDDA BULSHADA
Kalluunka Unifiram Application Alzheimer Dementia, Daaweynta Cudurka Cognition, Daaweynta Daawooyinka NEUROLOGIC
qaydhiin Unifiram budada (272786-64-8)
Unifiram budada (272786-64-8) Farsamaynta ficilada?
Unifiram waa unugyada xayeysiinta ee ambalaasta ee AMPA. Sida Ampakine, Unifiram waxay saameyn ku yeelataa glutamate ee maskaxda taas oo keenaysa gudbin kufsi ah oo dhexdhexaad ah oo u dhaxeysa neur-mareenka.
Unifiram ayaa sidoo kale kicinaysa waxsoosaarka acetylcholine ee samaynta farsamaynteeda ficilka ee la mid ah Noopept, Pramiraceta, Oxiracetam iyo faretamam nootropics kale.
Ma jirto baaritaan aan loo baahnayn Unifiram oo ka badan kuwa dhiggooda ah Sunifiram, laakiin labadan kiimiko ayaa si dhow ula xiriira waxayna aaminsan yihiin in ay ka shaqeeyaan siyaabo isku mid ah.
Faa'iidooyinka of Unifiram budada (272786-64-8)
Sida jaceylka, Unifiram waxaa la rumeysan yahay in uu horumariyo barashada, xusuusta, diirada, tamarta maskaxda iyo garashada asaasiga ah.
talinayo Unifiram budada (272786-64-8) Qiyaasta
Dadka raba inay isticmaalaan budada unifiram waa inay bilaabaan qadar yar inta ay qiimeynayaan saameynta uu Unifiram ku leeyahay shaqadooda jidhkooda. Qiyaasta ayaa kordhi karta marka jirku u isticmaalo. Waxaad ka bilaabi kartaa millimitirka 5 qiyaasta maalin kasta.
Dhibaatooyinka ay keento of Unifiram budada (272786-64-8)
Xaaladaha qaarkood, kor u kaca heerka garaaca wadnaha ayaa la soo sheegay. Tani waxay keeni kartaa cadaadis dhiig oo sarreeya. Marka qiyaasta daawada unifiram ay tahay qandho sare, dawakhaad iyo madax xanuun ayaa sidoo kale la kulmi karaa. Xaaladaha kale, calool-istaagga iyo dhaqdhaqaaqa aan joogto ahayn waa la diiwaan gelin karaa. Ilaa hadda, ma jiraan wax is burinaya oo ku saabsan Unifiram iyo waxyaabo kale ama daawooyin kale.